कसरी कमजोर PC मा GTA5चलाउन? सुझाव
GTA5- तेस्रो व्यक्ति शूटर को लोकप्रिय विधा मा पंथ खेल। रकस्टार खेल मा विकासकर्ता एक पटक फेरि गेमिङ उद्योग मा सबै भन्दा ठूलो श्रृंखला को एक को प्रशंसक प्रसन्न हुन्छु। खेल सबै तत्व को पाँचौ भाग द्वारा अंतिम रूप र मनमा कुराकानी गरिएको छ। विश्व सबैभन्दा विस्तृत र जीवित प्राप्त। प्लट हास्य, व्यंग्य र नापसंद को एक नयाँ स्तर पुगेको छ। खेल कन्सोल को अघिल्लो पुस्ता मा 2012 मा जारी भएको थियो। लामो समय को लागि व्यक्तिगत कम्प्युटर मा खेलाडीहरू मञ्चमा तिनीहरूलाई लागि पर्खेको। अर्को पुस्ता कन्सोल को आगमन र खेल पीसी मा जारी भएको थियो। यस लेखमा तपाईं कसरी कमजोर PC मा GTA5चलाउन र यो आवश्यक हुनेछ भनेर जान्न हुनेछ।
यस श्रृंखला को सबै प्रशंसक व्यक्तिगत कम्प्युटर को स्थानान्तरण भन्दा गैर-अनुकूलित खेल को शीर्षक प्राप्त पछि जो, को GTA श्रृंखला, को चौथो भाग सम्झना हुनेछ। परियोजना मूल कन्सोल लागि विकसित थियो पछि, पीसी गम्भीर समस्या छ। एक भिडियो कार्ड बिना काम छोडेर गर्दा खेल, यस CPU लोड। कारीगरों निरन्तर स्थिर काम हो अलिकति कि पैच, कम संकल्प बनावट, र अन्य धेरै फिक्स विज्ञप्ति। GTA4अधिकांश आधुनिक कम्प्युटर मा ब्रेक गर्न अझै पनि छ।
स्थिति को पाँचौ मा धेरै राम्रो छ। खेलाडी र एक वर्ष भन्दा बढी प्रतीक्षा थियो हुनत, तर तिनीहरू बरु कन्सोल पोर्ट को वक्र भन्दा, पीसी लागि पूर्ण खेल गर्यो। खेल प्रत्येक सेटिङ संग मध्य र कमजोर विन्यास मा चुपचाप चल्छ। मान्छे चुपचाप एक ल्यापटप संग खेल्दै र रमाइलो। तथापि, अनुकूलित छन् विन्यास चलाउन र समय तालिका पर्याप्त खेल लागि न्यूनतम आवश्यकताहरू तल गाह्रो छ मा। कसरी GTA5चलाउन ढिलाइ बिना कमजोर PC मा? का सबैभन्दा सरल तरिका सुरु गरौँ।
सुरु गर्न, न्यूनतम सिस्टम आवश्यकताहरु आफ्नो पीसी को विशेषताहरु तुलना गर्नुहोस्। आफ्नो कम्प्युटर 4-कोर प्रोसेसर, "इंटेल" वा AMD 2.5 GHz वा उच्च, राम को4जीबी को एक न्यूनतम, DirectX 10 संग भिडियो स्मृति2जीबी वा स्थापनाका लागि आफ्नो हार्ड ड्राइभमा स्पेस पछि समर्थन 65 जीबी हुनुपर्छ। यी खेल सञ्चालन गर्न न्यूनतम आवश्यकताहरू। तर, यो यो सिस्टम तपाईंलाई न्यूनतम ग्राफिक्स गुणस्तर सेटिङ मा ढिलाइ को छुटकारा प्राप्त मतलब छैन।
सरल सुझाव: कसरी कमजोर PC मा GTA5चलाउन
पहिलो कुरा सबै न्यूनतम गर्न ग्राफिक्स सेटिङहरू कम। प्रदर्शन निकै स्क्रिन संकल्प असर गर्छ, त्यसैले यसलाई साथै यसलाई कम गर्न सिफारिस गरिएको छ। तथापि, यो ज्यादा छैन वा तपाईंले आँखा थकित छन् जो एक grainy तस्वीर प्राप्त हुनेछ। सेटिङ मेनुमा, तपाईं भिडियो डाउनलोड को एक पट्टी देख्नुहुनेछ। पट्टी सेतो उत्तेजित गर्दछ गर्दा, समय तालिका "मार्न" गर्न रोक्न - आफ्नो भिडियो कार्ड लोड ह्यान्डल हुनेछ।
छैन प्रदर्शन मा कम्तिमा भूमिका कम्प्युटरमा प्रोसेसर खेल्छ। तपाईं राम्रो ग्राफिक्स कार्ड, तर खुलस्त पुरानो र कमजोर प्रोसेसर छ भने, निरन्तर जम्छ र ब्रेक प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यस मामला मा प्रदर्शन वृद्धि गर्न प्रोसेसर परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर असक्षम कम्प्युटर हार्डवेयर मा लोड कम। सधैं ब्राउजर, डेस्कटपविकृति र अन्य तेस्रो पक्ष प्रक्रियाहरू छन् कि systemic छैन बन्द गर्नुहोस्। त्यसपछि खेल सुरु गर्न र प्रदर्शन जाँच गर्नुहोस्। प्रति दोस्रो (fps) तपाईं फ्रेम जो इन्टरनेटमा निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ एउटा सानो FRAPS उपयोगिता, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रति सेकेन्ड फ्रेम को सर्वोत्कृष्ट नम्बर - 25 वा 30 (तपाईं थप ढिलो कम्प्युटर मा प्राप्त छैन)। अब हामी कमजोर पीसी भिडियो कार्ड निर्माता देखि उपकरण प्रयोग GTA5चलाउन कसरी हेर्न।
NVIDIA अनुभव र AMD उत्प्रेरक
यी दुई उपकरण खेल मा आफ्नो ग्राफिक्स कार्ड र ग्राफिक्स सेटिङहरू प्रदर्शन अनुकूलन गर्न मद्दत गर्छ। दुवै कार्यक्रम तपाईंलाई प्रदर्शन मोडमा ग्राफिक्स कार्ड कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारण, तस्विर गुणस्तर मा गुमाउन (त्यहाँ वस्तुहरु, बनावट र विरोधी aliasing गुणस्तर को किनाराको मा "भर्याङ" हुनेछ हुन गिर गर्न, र यति मा), तर तपाईं GTA5मा केही treasured शट प्राप्त।
"छ nvidia" को उपयोगिता स्वतः ग्राफिक्स सेटिङहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कार्यक्रम पुस्तकालयमा पर्याप्त GTA5थप्न र क्लिक "सेटिङ अनुकूलन गर्नुहोस्।" अब तपाईं कसरी सफ्टवेयर प्रयोग कमजोर PC मा GTA5चलाउन थाहा छ। तर, यो विकल्प छैन धेरै पुरानो विन्यास लागि उपयुक्त छ। यहाँ तपाईँले थप आमूल उपाय जाने छ। पीसी कारीगरों मा खेल को प्रारम्भिक रिलिज फिर्ता बनावट कम संकल्प प्रतिस्थापन गर्न पैच फैलाउन थाले। साथै, धेरै अवैतनिक फैशन खेल छाया, विचार, र अन्य सुविधाहरु सामग्री मालिक थप शक्तिशाली कम्प्युटर हटाइयो।
GTA5कसरी चलाउन कमजोर PC मा: बनावट मा प्याच
यो प्याच संग, तपाईं GTA5ग्राफिक्स सेटिङहरू थप खेल निर्मित अनुमति भन्दा कम गर्न सक्छ। डाउनलोड पाक चरम कम अन्त पीसी सेटिङमा, र आफ्नो कम्प्युटरमा अनजिप। तपाईं settings.xml फाइल प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ। यस पूर्व, यो mod काम गर्दैन भने, मामला मा मूल फाइल प्रतिलिपि गर्न सिफारिस गरिएको छ।
को GTA5को स्थापना व्यावहारिक सबै छाया गायब हुनेछ फलस्वरूप, बनावट एक कम संकल्प प्रतिस्थापन गरिनेछ। तपाईं तुरुन्त प्रति सेकेन्ड वृद्धि भएको फ्रेम नोटिस हुनेछ। यो विधि मिति गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। अब तपाईं कसरी कमजोर पीसी (32 बिट र 64 बिट) मा GTA5चलाउन थाहा छ।
सबै अरू असफल भएमा
तपाईं यो लेख, तरिकामा सबै कदम प्रयास गरेका छन् र सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न भने, यो आफ्नो पुरानो कम्प्युटर अपग्रेड गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै, इन्टरनेट खेल प्रशंसकहरूको समस्या र सल्लाह समाधान गर्न धेरै तरिका पाउन सक्नुहुन्छ। "Peekaboo" - जो मा साइट तपाईं कमजोर PC मा GTA5चलाउन कसरी धेरै सुझावहरू पाउनुहुनेछ। यो अक्सर विस्तृत निर्देशनहरू र आवश्यक सन्दर्भ संग अनुकूलन सुझावहरू फैलाउन छ।
रोचक आवेदन को एक चयन: "एन्ड्रोइड" त्यस प्ले मा
संयुक्त कम्पनी RUSAL: संरचना, व्यवस्थापन, उत्पादन
परिभाषा: को इतिहासकार गर्ने छ
फोटोग्राफर सबै दुनिया भर देखि रातो-haired मान्छे को सुन्दरता celebrates: आश्चर्यजनक तस्वीर कैद
प्याकेजिङ्ग एक विशेष छवि सिर्जना गर्दछ।